Ma suurto ii inuu ka soo kabsado WD My Passport Data?
Qabtaan WD My Passport Recovery in 3 Talaabooyinka
1 Ma u suurto Me inuu ka soo kabsado WD My Passport Data?
Hello, waxaan haystaa adag drive WD My Passport iyo waxaan lahaa sawiro badan oo ku yaal. Maanta markii aan xiriir la leh aan computer, aan computer waxaa la ogaado, laakiin waxba laga helay. Aad ayaan ugu careysan oo arrintan ku saabsan. Maxaa samayn karaa? Ma jiraa software kasta oo ay iga caawin kartaa inuu ka soo kabsado xogta ka WD My Passport HD sidii aan dhab ahaantii u baahan photos kuwii? Best xiriira.
Maalmahan Wd My Passport HD waa qaar badan oo ka caan ah sababta oo ah feature qaadi karo. Si fudud aad ku qori kartaa noocyo kala duwan oo faylasha waxa ku jira. Si kastaba ha ahaatee, faylasha sida waraaqaha muhiimka ah ama sawiro lagu lumin karaa sabab u ah in aad tirtirka qaldo, formatted HD ama xitaa baadi nidaamka iyo aad dareento in ay adag tahay inuu ka soo kabsado xogta ka WD My Passport HD.
Nasiib wanaag, weli waxaad ku dhammayn kartaa xogta soo kabashada WD My Passport la barnaamij soo kabashada xogta. Halkan waxaad isku dayi kartaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Waxaa u adeegta labada Windows iyo Mac isticmaala inuu ka soo kabsado tirtiray ama xogta ka WD My Passport HD badiyay fudayd.
Waxaad ka hoos ku soo bixi kartaa WD My Passport xogta soo kabashada degdeg ah, ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
2 Qabtaan WD My Passport Recovery in 3 Talaabooyinka
Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka, waxaad u baahan doontaa 5 kabashada hababka uu ka soo xusho interface bilowgii ay. Halkan waxaan ku talinaynaa in aad isticmaasho "lumay Recovery File" hore, waa wax ku ool ah ay u soo ceshano files tirtiray ka WD My Passport HD. Haddii hab caawin ma, waxaad isku deyi kartaa fursadaha kale.
Tallaabada 2 baarista WD My Passport HD
Ka dib markii xulashada habka dib u soo kabashada, waxaad waxaa lagaa codsanayaa in ay doortaan xijaab si scan. Halkan waxa aad u baahan tahay in ay doortaan aad WD My Passport meesha aad la tirtiro ama laga badiyay faylasha aad ka dibna riix "Start Scan" si ay u baadhaan faylasha aad HD.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh tirtiray ama u Khasaaray faylasha iyo badbaadiyo, waa in aad Mac
Marka scan ay ka badan tahay, waxaad arki doontaa interface ah sida hoos ku qoran. Your files tirtiray ama laga badiyay ku qoran yihiin la magaca asalka ah iyo waddada.
Version maxkamad wuxuu kuu ogol yahay in ay ku eegaan faahfaahinta helay files. Waxaad ka eegi kartaa haddii ay yihiin faylasha aad rabto ama aan si fudud.
Tallaabada ugu dambaysaa waxay tahay in la hubiyo faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan oo waxaan iyaga ku badbaadin ee Mac.
Notes: Si aad u soo kabashada guul, fadlan ha ka dib si aad u WD My Passport badbaadiyo files soo kabsaday mar kale.
Features ee Wondershare Data Recovery:
1. waxa uu barnaamijkaaga u user saaxiibtinimo kabanayso tirtiray, formatted laga badiyay oo ay ku jiraan xogta dokumentiyada, sawirada, videos, audio, emails, iyo archives gabi ahaanba.
2. Waxaa si buuxda la jaan qaada computer, drives adag dibadda iyo kaararka SD.
> Resource > Ladnaansho > Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Faylal ay ka WD My Passport Hard Drive